Onye na-emepụta ihe na-emepụta ígwè na-acha odo odo na-acha odo odo
Nkọwa:Okwute Ntugharị Na-ekpuchi Ụlọ Ọrụ,Onye na-ejide ígwè na-ekpuchi Silicone,Onye na-acha uhie uhie na-ekpuchi Silicone Steering
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Onye na-emepụta ihe na-emepụta ígwè na-acha odo odo na-acha odo odo
Ihe Nlereanya.: SWC2304
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ikpuchi wiil silicone maka afọ 8. The ndị na nke silicone n'iru wheel njide aha ya bụ Lichee nke a na-eme 100% nri mkpụrụ edo. Ngwongwo na-agba chaa chaa chaa chaa chaa chaa chaa na-acha ihe dị 33cm ruo 38cm. Ụlọ ọrụ anyị na-eji silik kachasị mma iji mepụta mkpuchi ụkwụ uhie silicone . S teering wheel cover ike ga-eji nke fọrọ nke nta ụgbọala. S teering wheel cover 38 cm na-mmasị site ọtụtụ ahịa, n'ihi na size nwere ike ji mee ihe maka ọtụtụ ụdị ụgbọala. Ihe mkpuchi uhie uhie uhie na- eme ka ụgbọ ala gị mara mma, ka ị hụ ya n'anya nke ukwuu. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ mkpuchi wheel , ị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị.
Ihe mkpuchi kpụkọrọ akpụkpọ silicone silicone dị arọ maka ụgbọala Kpọtụrụ ugbu a
Ntube ohuru ihe mkpuchi igwe uhie uhie Kpọtụrụ ugbu a
Okwute Ntugharị Na-ekpuchi Ụlọ Ọrụ Onye na-ejide ígwè na-ekpuchi Silicone Onye na-acha uhie uhie na-ekpuchi Silicone Steering Okwute Uhie Na-ekpuchi Ụgbọala Okwute Uhie Na-ekpuchi Maka Ụgbọ Okwute Uhie Na-ekpo ọkụ Okwute uhie akpụkpọ ụkwụ Ntugharị Ọhụụ Ọhụrụ